Notanterahina tetsy amin’ny Carlton Anosy ny atrik’asa izay hiarahan’ny firenena Britanika sy Malagasy, karakarain’ny UKTP mahakasika fanatsarana ny harifenitra an’ireo vokatra famokarana lamba sy akanjo na textile eto Madagasikara. Hisy ny fitadiavana vahaolana amin’ity atrik’asa ity izay fifampiraharahana amin’ny fanjakana satria mety hisy ny tsy fahafahan’ny orin’asa miodina. Vonona ny UKTP hanampy ny fanjakana ahafahana manodina ireo akora fototra. Ny UKTP ihany koa dia manampy ireo orin’asa ahafahana manodrana any Royaume unie, ary manome fanampiana amin’ny fanamafisana ny traik’efa eo amin’ny ministera sy ireo sampam-panjakana samihafa. (Jereo Sary Tohiny)
Ny tolakandron’ity talata 29 oktobra 2019 ity no niantsona eto amin’ny seranantsambon’i Toamasina ny sambo mpitatitra solika MT/ MR AQUARIUS, izay mitondra gazoala 36,6 tapitrisa litatra. Hisy sambo hafa ho avy amin’ny 15 novambra 2019. Ny alahady 27 oktobra dia lasantsy 600 000 litatra sy gasoil 2 300 000 litatra no niala teto Toamasina namatsiana ireo toby fitehirizan-tsolika any Antananarivo sy ny faritra.
Sazy ara-bola mitentina 120 tapitrisa Ariary ho an’ny orinasa Logistique Pétrolière SA (LPSA), ary 60 tapitrisa Ariary isanisany ny an’ny orinasa Total ary Vivo (Shell). Nivoitra ireo ny alatsinainy 28 oktobra nandritra ny tafa tamin’ny mpanao gazety nataon’ny minisitry ny angovo sy ny rano ary ny akoran’afo Andriamanga Vonjy, sy ny avy amin’ny OMH (Office Malgache des Hydrocarbures) teny Ampandrianomby-Antananarivo. Ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny solika ireo no nahatonga ireny fikorontanana tamin’ny famatsiana solika tamin'ny herinandro ireny ka nahatonga ny Ministeran'ny Angovo nandray ny fepetra, araka ny fanazavan’ny minisitra.
Namory ireo mpandraharaha solika ao amin’ny GPM (Groupement des Pétroliers de Madagascar) ahitana ny Galana, Vivo, Jovena, Total, LPSA ary GRT, tao Ambohitsorohitra ny tolakandron’ity zoma 25 oktobra 2019 ity, ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, vao tafaverina avy any Sotchi, nandray anjara tamin’ny fihaonana an-tampony Rosia-Afrika. Nambaran’i Andry Rajoelina tamin’ireto mpandraharaha ireto fa hanao tolobidy ny fitondram-panjakana afaka fotoana fohy, amin'ny fanafarana mivantana solika mba hisorohana ny tsy fahampian'ny solika toy ny nitranga hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity, izay niteraka fitaintainana sy nampisavorovo ny saim-bahoaka sy ny nampihemotra ny raharaha ara-toekarena. Afaka mandray anjara amin’izany tolobidy izany na tsia ireo mpandraharaha solika misy eto ireo. Nilaza ny filoha Rajoelina fa tsy nanaja ny voafaritry ny làlana ny amin’ny tokony hametrahana tahirin-tsolika 21 andro ireo mpandraharaha, fa 5 ka hatramin’ny 10 andro no nisy ka niteraka ny fikorontanana tamin’ny fitsinjarana solika teto an-drenivohitra.
Manoloana ny loto sy fanimbana ny tontolo iainana ateraky ny orinasa JR Métaux, fandrendrehana vy etsy Ampangabe Analamanga, dia nidina teny an-toerana ny solotenan'ny sampan-draharaha miaro ny tontolo iainana, na ny ONE. Ka dia nametraka ny fepetra rehetra tsy maintsy atao, hiarovana amin'ny fiparitahan'ny setroka misy taim-by, izay mankarary ny mponina eny an-toerana, ny fitandroana ny rano, ny fiparitahan'ny fako, ny fiarovana ny mpiasa, ny fanarahan-dalàna manodidina ny fahasalaman'ny mpiasa. Nanome fepotoana ho an'ny orinasa JR Métaux ny ONE, ary efa voaray avy amin'ny mpampiasa ny tetikasa fanitsiana hanatsarana ny tontolo iainana. Eo ampandinihina izany tetikasa fanitsiana izany ny ONE, ary dia hanara-maso ny fanatsarana rehetra atao. (Tahirin-tsary sy ampahan'ny fepetra tsy maintsy tanterahin'ny orinasa JR Métaux) (Jereo Sary Tohiny)
Ho tanterahina ny 06 ka hatramin’ny 09 novambra 2019, eny amin’ny CCI Ivato ny andiany voalohany amin’ny varotra sy fampiratiana biôlôjika, na “Salon Biolojika” karakarain’ny SYMABIO (Syndicat Malgache de l’Agriculture Biologique) miaraka amin’ny Ministeran’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Manodidina ny 150 eo ireo mpandray anjara amin’ity hetsika ity, ahitana ireo mpisehatra biôlôjika.
Mizaka ny olana amin’ny famatsian-drano ihany koa ireo orinasa afakaba (Zone Franche) eto an-drenivohitra, indrindra ireo miasa amin’ny sehatry ny « textile », mamokatra akanjo. Fotoana mahabetsaka ny kaomandy izao, ary nampiditra mpiasa ny ankamaroan’ireo « Zone Franche » hanenjehana izany ara-potoana. Voatery matsaka eny anan-drenirano ny « Zone Franche » sasany amin’ny fanatanterahana ny asa, ao koa ireo orinasa mamokatra jiro ho azy manokana noho ny halafosan’ny herinaratry ny Jirama, nefa matetika tapaka. Vao mitsidika anefa ity ny vanimpotoana maintany.
Eo ampiandrasana ny fanendrena izay ho Tale jeneraly vaovaon’ny Jirama, toerana izay banga nanomboka ny 14 aogositra 2019, dia nanapa-kevitra ny hampahafantatra ny tondrozotra hanarenana ny orinasa ny filankevim-pitantanan'ny JIRAMA, tamin’ny alalan’ny Filohany Andriamanampisoa Rasamoelina Solo. Mifototra amin’ny teboka maromaro ny tondrozotra, araka ny fampahafantarana natao ny sabotsy 12 oktobra 2019, nanoloana ny solontenan’ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny JIRAMA, ny mpandraharaha, ny Fiaraha-monim-pirenena ary ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Eto ny fanatsarana ny fitantanana ho matianina ; ny fahaiza-mitantana sy fahafehezana ny famatsiana solika hampihena ny fandaniana. Eo koa ny fanatsarana ny vokatra amin'ny alalan'ny fanenana ny fatiantoka ara-teknika sy tsy ara-teknika hampiakarana ny tahan'ny fampidiram-bola.
Mpampiofana efatra mianadahy avy any Nairobi Kenya no tonga mizara traikefa amin’ireo mpiompy tantely avy amin’ny Distrikan’i Morondava, Mahabo, Miandrivazo ary Belo Tsiribihina nanomboka ny alarobia 9 oktobra 2019. Anofanana azy ireo ny fomba fiompiana tantely manarapenitra sy ny fiompiana tantely miaro ny tontolo iaina ary fomba fanodinana ny tantely. Hitohy hatramin'ny alahady ny fiofanana. (Jereo Sary Tohiny)
Fitaintainana hatrany no mahazo ny mpandraharaha isan-taona amin’ny fotoana fanaovana ny fangatahana ahazoana « Agrément d'exportateur de vanille » satria na mahafeno fepetra tahaky ny inona aza, mety tsy ahazo, ary tsy azo ivalozana ny lisitra avoakan'ny ministera. Didim-pitondrana iraisan’ny ministera (Arrêté interministériel) no mitanisa ireo fepetra rehetra takiana amin'ny fahazoana ny « Agrément d'exportateur de vanille » ary tena mazava ireo fepetra ireo ka tokony na mahatanteraka azy rehetra ka mahazo, na misy tsy tanteraka ka tokony tsy ahazo.